Daacish Oo Dagaalyahano Kusoo Bandhigtay BARI + Sawirro
Boosaaso (Wararka Maanta) – Kooxda Daacish faraceeda Soomaaliya ayaa soo badhigtay sawirrada dagaaalyahano fara badan oo ka tirsan kooxdaasi, kuwaas oo ku sugan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari ee hoostaga dowlad goboleedka Puntland.
Sida ay baahisay warbaahinta rasmiga ah ee Daacish waxaa sawirrada kasoo muuqday dagaalamayaasha kooxdaas iyo saraakiishooda oo dhoolatus ka sameynaya halkaasi.
Sidoo kale waxaa xoogaga lasoo bandhigay oo afka soo duubtay ay ahaayeen kuwo aad u hubeysanaa, waxayna wateen hub noocyo kala duwan leh.
Daacish ayaa sanad kasta marka la gaaro xilliyada Ciidaha dagaalyahano cusub ku soo bandhigto dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari, iyaga oo sameeya dhoolatus milatari.
Bandhigan ee ay sameysay kooxda Daacish ayaa kusoo aadaya, xilli muddooyinkii lasoo dhaafay howl-gallo ballaaran Puntland ay ka waday gobolka Bari ee maamulkaasi.
Puntland ayaana dagaalladaasi ka sheegatay guulo waa weyn, iyada oo shaacisay inay khasaare iyo jab xoogan ku gaarsiisay kooxaha argagixsada.
Si kastaba kooxda Daacish ee uu hoggaamiyo Sheekh C/qaadir Muumin ayaa gacanta waxa ay ku heysaa deegaano ku yaal gobolka Bari, iyada oo dagaallo la gasha Puntland.
The post Daacish oo dagaalyahano kusoo bandhigtay BARI + Sawirro appeared first on Wararka Maanta.